Warshadaynta_Cold Folding Iyo Hot Forging_Forged Flange - Mingda
Tayada Dammaanad Leh
Adeeg ku tiirsan
Shirkadda Ganacsiga Caalamiga ah ee Hebei Mingda
Shirkadda Ganacsiga Caalamiga ah ee Hebei Mingda waa shirkad ganacsi oo ku takhasustay shubista, iska cafinta iyo qaybaha mashiinnada.
Waxaan leenahay isdhexgal ganacsi oo qoto dheer oo lala yeesho wax soosaarka magaalooyinka waaweyn ee Shiinaha, sidaa darteed waxaan nahay kuwo aad u jilicsan oo kalsooni ku qaba in aan noqono nooc kasta oo alaabooyin shub ah si aan awood ugu yeelano in aan la kulano macaamiishayada 'ququal tirada iyo waqtiga dhalmada
Shirkadda Ganacsiga Caalamiga ah ee Hebei Mingda waxay u shaqeysaa sidii shirkad gaar ah oo ku takhasustay noocyada noocyada kala-bixinta.
Suuqa flange steel carbon caalamiga ah ee ...
Warbixintii ugu dambeysay ee ay daabacday Rreportspedia waxaa loogu magac daray “Suuqa Carnge Steel Carbon Flange Market”, oo ah mid cusub oo lagu soo kordhiyay hantida shirkadda. Cilmi-baaristani waxay tixgelisay furaha se ...
Ururka macdanta ayaa magacaabay Mento Rich a ...
Rich Mento iyo Russell Boast waxaa loo magacaabay inay wada-guddoomiyeyaal ka noqdaan Ururka Masaarida Mareykanka. Mento, oo horey u ahaa gudoomiye ku xigeenka ururka, wuxuu la shaqeyn doonaa Boast, oo u adeegay ...
Marka la gaaro 2027, qaybaha gawaarida been abuurka ah ee wi ...
Qaybaha gawaarida ee warbixinta been abuurka ah ayaa loo qaybiyaa qaybo badan, oo caddaynaya muhiimada sahaminta tirakoobka ee tobanka sano ee soo socota (2020-2027). Warbixintan waxaa loogu talagalay inay buuxiso baahida ...